Nhau - Zvatakagadzira mu2020
Takatarisana ne "kutanga kwakaoma" kunokonzerwa nedenda ra2020, indasitiri yekuChina yekumba yakatambura kurohwa kwakateedzana, uye kuoma kwekutangazve basa nekugadzira kwave kwakakurumbira.
Mushure meiyi denda, yechinyakare zvemagetsi zvigadzirwa indasitiri ichawedzera kushingairira kufunga nezve nekucherechedza kune kwakajeka kuvaka kwemafekitori, uye kusimudzira kushandiswa kwemhando yekugadzira mitsara
Chitsauko chekutanga chechiratidziro icho XJCSENSOR chakapinda mu:
YeChina China Electronics Kugadzira Zvemagetsi & Zvekushandisa Exhibition (CMM) yakaitwa muna Chikunguru 9-11 kuDongguan · Guangdong Yemazuva Ano International Exhibition Center.
Mu2019 ~ 2020, XJCSENSOR inopa mari $ 15,385 uye inobatsira Taitung Village, Chengdong Town, Haifeng County kubvisa hurombo, Kwakanyatso kupedza hurombo uye kuparadzira rudo!
Zvinonzwisisika kuti mumakore matatu apfuura, Henggang Sub-district (dunhu) uko XJCSENSOR iriko yakasimudza mari inopfuura mamirioni mapfumbamwe ekuvaka mapurojekiti gumi nemana ehupenyu muTaitung Village, kusanganisira mvura yemupombi, mwenje yemigwagwa nemigwagwa yemumusha, ku kugadzirisa nharaunda yekugara yeMusha weTaitung.
Musha wekare weTaitung wave nechitarisiko chitsva, makomo nenzizi dzakanaka, uye migwagwa haina kumiswa.
Panguva imwecheteyo, pamusoro pemakore matatu apfuura, Henggang Sub-dunhu yanga ichitungamira basa rekudzora hurombo nekuvaka bato, ichitarisa kumutsidzirwa kwekumaruwa, kuona kuvakwa kwenzvimbo nyowani dzekumaruwa, nekusimbisa hupfumi hwenyika.
XJCSENSOR inoda kupa mupiro mudiki kune wekunze urombo hunokonzera, uye ichagara ichiteerera uye kutsigira.
Muna 22nd, Chikunguru. XJCSENSOR yakapinda mu "DIC EXPO 2020", iyo "DIC EXPO International Display Technology uye Application Innovation Exhibition (" DIC EXPO 2020 ") inotsigirwa neLCD Branch yeChina Optics uye Optoelectronics Industry Association. Rutsigiro rwakasimba kubva kune vakawanda vanozivikanwa varatidziri.
Kubva 15 kusvika 19, Gunyana. XJCSENSOR yakapinda muThe 22nd China International Industry Fair ("CIIF") iyo ichaitirwa kuNational Convention uye Exhibition Center (Shanghai), ichi ndicho chiitiko chekutanga chemaindasitiri chakaitirwa pasirese pasirese muna 2020. Muchiitiko ichi, XJCSENSOR yakaburitsa chigadzirwa chitsva , tension sensor uye yakawanda-axis sensor.
Kubva 12 kusvika 15, Gumiguru 2020. XJCSENSOR inounza mhinduro dzayo nyowani, inoratidzira mhinduro nyowani yechigadzirwa uye patent dzakapinda muSouth China International Industry Fair (SCIIF) yakaitirwa muBaoan New Hall yeSenzhen International Convention uye Exhibition Center, Zvakakodzera kutaura kuti munguva ino yeindasitiri 4.0, muchina chiratidzo chakatora nzvimbo yakakosha mumunda wekugadzira zvine hungwaru. Makambani mazhinji ekuongorora anoonekwa akabuda panguva yenhoroondo. XJCSENSOR inovimba nebasa rayo rakaoma uye simba rekusangana nematambudziko ese uye mukana mumakwikwi eiyo indasitiri. Panguva imwecheteyo, inotarisira kushandisa chikuva cheSouth China Indasitiri Yezvakanaka kurega vanhu vazhinji vachipupurira mumunda wemuchina wekuona kuongorora tekinoroji Mukukura.
2nd ~ 4th, Mbudzi, XJCSENSOR akatanga kutora chikamu muIBTE 2020 Shenzhen Battery Technology Exhibition, iyi yakanaka inounza pamwe varatidziri vemabhatiri emagetsi, mabhatiri emagetsi ekuchengetedza, 3C mabhatiri uye kumusoro uye ezasi kwezvinhu uye zvigadzirwa zvekugadzira kuti vabudirire pamwe China ye lithiamu bhatiri indasitiri.
Kubva musi wa28 kusvika 30, Zvita, wechi30 "Shenzhen International Medical Instruments uye Equipment Exhibition" mu2020 ichaitirwa kuShenzhen International Convention uye Exhibition Center.
Kuburikidza ne "2020 Shenzhen International Medical Instruments uye Equipment Exhibition", XJCSENSOR yakasangana nevatengi vemhando yepamusoro nemutengo wakaderera ndokuva mutengesi wevangangodaro vatengi vekunze; inogona kutaurirana zvakatarisana nevatengi uye kunyatsonzwisisa zvido nezvinodiwa zvevatengi. Sangano uye maitiro ekutenga; iwo mutengo wepasi-shoma wekutengesa kupfuudza ruzivo rwako rwekuonana uye tsika yemakambani kune vatengi vari kutora chikamu mumusangano
XJCSENSOR kushambadzira investimenti mu2020 ingangoita $ 123000. Pasi pechirwere, mari yedu yasvika mune ramangwana rakajeka, iro rakapetwa kaviri zvichienzaniswa ne2019.
Kubatana kwedu neFOXCONN, ABB, EPSON, TTI, HUAWEI, ATL, Philips, Hyundai, Canon Tokki, Kusvika nevamwe vatengi, pamwe neHarbin Institute of Technology, Beijing Institute of Technology, Zhejiang Institute of Technology, Wuhan University uye mamwe mayunivhesiti. yave ichiwedzera zvishoma nezvishoma.